Luigi ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပြခန်းပါသော LEGO Super Mario Adventures
06 / 08 / 2021 06 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 585 Views စာ 1 မှတ်ချက် Mario St ။ နှင့်အတူ 71360 Adventuresartသင်တန်း, 71367 Mario's House & Yoshi ချဲ့စက်များ, 71380 သင်၏စွန့်စားမှုပြုလုပ်သူ Set ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါ, Luigi St နှင့်အတူ 71387 Adventuresartသင်တန်း, App ကို, App ကိုထိန်းချုပ်ထားသော LEGO, စန်းပြန်း, Goomba, Koopa Troopa, Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego စူပါမာရီယို, Luigi, မာရီယို, multiplayer, ဆန်းစစ်ခြင်း, reviews, စူပါမာရီယို, စူပါမာရီယို Bros, Yoshi
အဆိုပါ Lego အုပ်စုသည်နောက်ဆုံးတွင် multiplayer ကိုယူဆောင်လာသည် Lego စူပါမာရီယို in Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို၊ startသင်၏လက်ရှိ Nintendo အပြင်အဆင်နှင့်အညီလုပ်ဆောင်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောသင်တန်းဖြစ်သည်။
ဘယ်တော့လဲ Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို ဧပြီလတွင်ပထမ ဦး ဆုံးထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်၊ မည်သူ့ကိုမျှနှုတ်မဆက်သည့်တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းမှာဤအရာသည်ကစားသူအများအပြားလာနေသည်ဟုဆိုလိုသလား Lego စူပါမာရီယိုယခုအချိန်ထိအများစုတစ် ဦး တည်းဖြစ်နေသောအပြန်အလှန်အကျိုးပြုအကြောင်းအရာတစ်ခု?
ငါတို့အခုသိတဲ့အတိုင်းအဖြေကကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် Mario Bros ကအတူတကွဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သလဲ Lego ပုံစံ? ပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ် Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို တစ်ကိုယ်တော် st အဖြစ်ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ပါartအစိမ်းရောင်နှင့်လိုက်ဖက်သောပိုက်ပြင်ကိုသူ၏ stockier အမွှာအစ်ကိုထက်ပိုနှစ်သက်သော Nintendo ပရိတ်သတ်များအတွက်သင်တန်းလား။
theme: စူပါမာရီယို အမည်သတ်မှတ်မည် - Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို ဖြန့်ချိ: သြဂုတ်လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 49.99 / $ 59.99 / € 59.99 အပိုင်းပိုင်း: 264 အသေးစားပုံများ: 0
ဒီဟာကမင်းရဲ့ပထမဆုံး rodeo မဟုတ်ရင် Lego စူပါမာရီယို ဆောင်ပုဒ်၊ ဤထုတ်ကုန်လိုင်း၏အစုံအားလုံးသည်လမ်းညွှန်ချက်လက်စွဲများကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်သည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။ ၎င်းအစား၊ မည်သို့စုပုံပုံကိုလေ့လာရန်ပူးတွဲပါ app ကိုဖွင့်ရန်လိုသည် Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကိုအထူးသဖြင့်ကန ဦး ပြင်ဆင်မှုအတွက်စက္ကူလက်စွဲတစ်ခုသေတ္တာထဲတွင်ထည့်ထားစဉ်အထူးသဖြင့်လျင်မြန်သောတည်ဆောက်သူများအတွက်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကဲ့သို့ခံစားရသည်။ Lego Luigi ။
တည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံကိုယ်တိုင်သည်လည်းဤအပြန်အလှန်အကျိုးပြုဆောင်ပုဒ်တွင်အခြားမည်သည့်အတွဲများကိုမဆို ၀ ယ်ယူဖူးသောပရိတ်သတ်များနှင့်အတော်လေးရင်းနှီးသင့်သည် မာရီယိုနှင့်အတူ 71360 Adventures ကို) အများအားဖြင့်၎င်းသည်ထူးခြားသော p တစ်ခုတည်းပေါ်တွင်များစွာမှီခိုနေသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်art ရှုထောင့်တိုင်းကိုဆက်စပ်ပေးတဲ့ palette Lego စူပါမာရီယို အတူတကွ။ ဒါဟာမကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသာထင်ရှားပါတယ် Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်ဟုယူဆရသည် စူပါမာရီယို မော်ဒယ်များ။
သို့သော်စတိုးဆိုင်၌အံ့သြစရာအနည်းငယ်ရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ Luigi ကိုယ်တိုင်ကအစုံရဲ့ဘတ်ဂျက်အများကြီးကိုထည့်တွက်ထားတာကြောင့်အဲဒါကအဆောက်အ ဦ အဆန်ဆုံးလည်းမဟုတ်ဘူး။ လက်ရှိရှိနေသော level modules များသည် tower biome အသစ်များစွာကိုကိုယ်စားပြုပြီးသင်ဖန်တီးနိုင်သောအလုံးစုံသောအရာများအတွက်အလွန်အရေးပါသည်။ သို့သော်တည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံသည်သင်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအမှန်တကယ်မရောက်ပါ Lego စူပါမာရီယို အတွက်သတ်မှတ်သည်။ ဤပုံစံများသည်ကစားနည်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဤအဆင့်တွင်ရှိသည်။ Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို သေချာပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီပြသနာတွေကအတူတူပါပဲ စူပါမာရီယို st ကတည်းကအကြောင်းအရာart အခြေခံအားဖြင့်အားလုံးရှိနေသေးသည်။ ရိုးရာဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုသင်ကိုယ်တိုင်မဖန်တီးလျှင်ရိုးရာစည်းမျဉ်းများနှင့်ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။ မင်းရဲ့ဂရုတစိုက်တည်ဆောက်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွှေ့ဖို့ဆိုတာအခြေခံအားဖြင့်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အချို့သောအသင်းငယ်များနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း (၎င်းတို့ကိုခုန်ခြင်း) ကို timer ကိုရိုက်ရန်ကြိုးစားစဉ်၎င်းတို့ဖျက်ဆီးခံရသည်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်။
သူကပြောသည် Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို ၎င်း၏ Mario counterp နှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိသည့် gameplay အတွေ့အကြုံလည်းပါဝင်သည်artဇာတ်ဝင်ခန်း၏နွေရာသီ ၂၀၂၁ အစုံအားလုံး၌တည်ရှိနေသေးသည့် multiplayer element ၏အရသာကိုမိတ်ဆက်ပေးသောရှုထောင့်အတားအဆီးတစ်ခုနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ မော်ဒယ်လ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်၊ Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုလိုခံစားရတယ် စူပါမာရီယို starter သင်တန်းပုံသေနည်း - ၎င်း၏ဇာတ်ကောင်များအပါအ ၀ င်မူလအစုမှသင်တစ်နှစ်အပြည့်လိုချင်သောအရာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 'ဇာတ်ကောင်များ' ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းခေါင်းစဉ်ခွဲသည်၎င်းထက်ပိုသင့်တော်သည် စူပါမာရီယို အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်မည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ဖြင့်မဆိုသေးငယ်သောပုံသေမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒီအစားဇာတ်ကောင်တွေပါ ၀ င်ပါတယ် Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောသို့မဟုတ် eponymous ပိုက်ပြင်သမား၏ကိစ္စတွင်၎င်းကိုရင်းနှီးသောပလတ်စတစ်ဖြင့်ထုပ်ထားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ဒြပ်စင်ကို သုံး၍ ပြုလုပ်သည်။
Luigi သည်သူ၏ဒီဇိုင်းများကို Mario ထံမှဒီဇိုင်းယူသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော reskin မဟုတ်ပါ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုလုံး၏အတိုင်းအတာများသည် Luigi ၏အရပ်ပိုရှည်ပြီးသေးသွယ်သောဘောင်ကိုထင်ဟပ်သည်။ သူ၏ခြေထောက်များနှင့် ဦး ခေါင်းနှစ်ခုစလုံးသည်မာရီယို၏ထက်ပိုရှည်သည်၊ သူ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အနည်းငယ်တိုသည်။ သူသည်သူ၏ dungarees များပေါ်တွင် ၁ × ၁ ပတ်လည်ကြွပ်ကြွပ်များကို ၀ တ်ဆင်ထားပြီးဒီဇိုင်းနှစ်ခုလုံး၌သဟဇာတဖြစ်မှုကိုသေချာစေသော်လည်း Luigi သည်အနားတွင်ပိုမိုထင်ရှားသောမျဉ်းကွေးပါ ၀ င်သော ဦး ထုပ်အစိတ်အပိုင်းအသစ်ကိုသုံးသည်။ အနီရောင်ဗားရှင်းကို ကျော်လွန်၍
Luigi ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းသည်သူ၏ဇာတ်ကောင်ကဲ့သို့အရေးကြီးသည်၊ Mario သည်အားကြီးသောဆင်တူမှုရှိသော gameplay element များနှင့်သူ၏တုံ့ပြန်မှုများစွာနှင့်အရေးကြီးသည်။ သူခုန်တယ်၊ အိပ်တယ်၊ ပြေးတယ်၊ မာရီယိုလိုပဲခေါက်လိုက်သေးတယ်။ Luigi သည်၎င်းတို့နှစ် ဦး ကိုခွဲခြားရန်တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းထားသော်လည်းအသံနှင့်လေသံအသစ်ဖြင့်တူသည်။ မရှိမဖြစ်အရေးကြီးဆုံး partသို့ရာတွင် Luigi နှင့် Mario သည်အချင်းချင်းမည်သည့်ညီအစ်ကိုမဆိုတတ်နိုင်သည်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။
ပုံတစ်ပုံစီ၏နောက်ကျောရှိ Bluetooth ခလုတ်ကိုတစ်ပြိုင်နက်တွန်းခြင်းဖြင့်စိတ်ထက်သန်သော Luigi သည် Bluetooth အမှတ်အသားနှင့်အဝါရောင် ၀ တ်ထားသောစုံတွဲအားနှုတ်ဆက်သည်။ ဤဇာတ်ကောင်နှစ်ခုလုံးတွင်ရရှိနိုင်သည့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်ကျယ်ပြန့်သည်၊ ၎င်းသည်၎င်းတို့အခြေစိုက်ထားသောဗီဒီယိုဂိမ်းအများစုထက်ပိုမိုရှည်လျားပြီး၎င်းထက်ကျော်လွန်ရန်အလားအလာများစွာရှိသည်။ Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်တိုးချဲ့ရေးအုပ်စုများသို့
Boom Boom၊ Bone Goomba နှင့် Pink Yoshi တို့ပါ ၀ င်သည်၊ ၎င်းအားလုံးသည်စားပွဲတစ်ခုအတွက်ထူးခြားသောရွေးချယ်မှုအသစ်များကိုယူဆောင်လာသည်။ စူပါမာရီယို သင်တန်း။ ပိုမိုထင်ရှားသောအစိမ်းရောင်ဗားရှင်းနှင့်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာသောမျိုးစိတ်များအတွက်နောက်ထပ်အရောင် 71367 Mario's House & Yoshi ချဲ့စက်များ အနည်းငယ်ထပ်တလဲလဲခံစားရနိုင်သည်၊ သို့သော်ထိုတိုးချဲ့ထုပ်ကိုမရယူရသေးသူများသည်ဤအထင်ကရဇာတ်ကောင်၏ဗားရှင်းကိုရရှိခြင်းကိုတန်ဖိုးထားမည်မှာသေချာသည်။
ပန်းရောင် Yoshi သည်မျက်နှာပြင်၌ပေါ်လာသောသင့်လျော်သောအရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံသွင်ပြင်နှင့်အတူ Luigi လက်ကိုငှါးရန်ကျန်နေသည်။ သိသိသာသာ Pink Yoshi ကိုထည့်လိုက်တာကဒီအစုကမူရင်းထက်စာလုံးတစ်လုံးပိုပါတယ် မာရီယို st နှင့်အတူ 71360 Adventuresartဟုတ်ပါတယ်တူညီသောစျေးနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်။
Boom Boom သည်နောက်ဆုံးပေါ်သူဌေးဖြစ်သည် စူပါမာရီယို ဆောင်ပုဒ်၊ ဒါပေမယ့်အသစ်တစ်ခုခုကိုမကမ်းလှမ်းပါဘူး (ကျော်ပါ၊ ခုန်ပါ၊ ဒင်္ဂါးများရယူပါ၊ ထပ်လုပ်ပါ) မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ၎င်းသည် Luigi ကိုတိုက်ခိုက်ရန် Bone Goomba ကိုအမိန့်ပေးသောအိမ်သူအိမ်သားတို့၏အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောအပန်းဖြေစစ်စစ်ဖြစ်သည်။ လှုပ်ရှားမှုအကန့်အသတ်ရှိသောကြောင့်မင်းကစားပွဲမှအထင်ကရလှုပ်ရှားမှု၌ပုံ၏လက်များကိုတင်ခွင့်ပြုသည်။
Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို တူသောစျေးနှုန်းတံဆိပ်၌လာသည် မာရီယိုနှင့်အတူ 71360 Adventures ကိုဒါပေမယ့်နောက်ထပ် p အနည်းငယ်ပါဝင်ပါတယ်arts နှင့်eတစ်ခုxtra ဇာတ်ကောင်။ အဲ့ဒါအပြင်သူတို့ကိုခွဲဖို့ကနည်းနည်းပဲရှိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကဒစ်ဂျစ်တယ်ကိန်းဂဏန်းရဲ့စျေးနှုန်းအတွက်တကယ်ဘဲပေးဆပ်နေရတာဘဲ၊ ဒါပေမယ့် ၇၁၃၈၀ Master Your Adventure ဘေးမှာ၊ အဲဒါကစျေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ (လက်တဆုပ်စာပိုသာတယ်။art၎) မည်သည့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းမှမပါဘဲ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောတန်ဖိုးရှိသည်။
အခြားရွေးချယ်စရာအချက်တစ်ခုအဖြစ် Lego စူပါမာရီယို franchise သို့မဟုတ် multiplayer သို့ ဦး တည်သောနည်းလမ်းများ၊ Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော Nintendo အစုံ၏ကျယ်ပြန့်သောအတန်းများတွင်ကောင်းစွာရပ်တည်နိုင်သည်။ သင်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသားဖြစ်ရင်တောင်မှကောက်ယူဖို့လုံလောက်တဲ့အကြောင်းရှိပါသေးတယ် မာရီယိုနှင့်အတူ 71360 Adventures ကို၎င်းသည်လုံးဝကောင်းမွန်သော startမင်းသင်တန်းမတက်ရသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့ Lego စူပါမာရီယို ဖောင်းပွ ရထား။
တကယ်တော့အဲဒါကိုပြောဖို့တရားမျှတပါတယ် Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို မာရီယိုသည်ကန ဦး ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်ထက်အခင်းအကျင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောနိဒါန်းတစ်ခု၊ အခင်းအကျင်းသည်မည်သို့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်ကိုပြသပြီးဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics မှာယူသည် Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို သို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုခု စူပါမာရီယို ငါတို့သုံးပြီးစုံ တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
LEGO Super Mario 71387 Adventures များကို Luigi နှင့်တည်ဆောက်ရန်မည်မျှကြာသနည်း။
သင်ပေါင်းစည်းရန်တစ်နာရီခန့်ကြာလိမ့်မည် Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံကိုပြင်ဆင်ခြင်း (သင်၏ဝက်အူလှည့်ကိုမမေ့ပါနှင့်)၊ ၎င်းမှာစိတ်ပျက်စရာ app-only ညွှန်ကြားချက်များမှတဆင့်နှိပ်ခြင်းပါ ၀ င်သောကောင်းသောအတုံးဖြစ်သည်။
LEGO Super Mario 71387 Adventures တွင် Luigi နှင့်အတူအပိုင်းဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။
Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို အပိုင်း ၂၈၀ သာပါ ၀ င်သောကြောင့် ၄၉ ထက်ပိုသည် မာရီယိုနှင့်အတူ 71360 Adventures ကိုဒါပေမယ့်ဒီဂျစ်တယ်ပုံရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုပြောနေတုန်းဘဲ။
LEGO Super Mario 71387 Adventures သည် Luigi နှင့်မည်မျှကြီးမားသနည်း။
Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို သင်တန်းသည်သင်ရွေးချယ်သည့်မည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုအမှန်သတ်မှတ်နိုင်သောကြောင့်တိုင်းတာရန်ခက်ခဲသည်။ မင်းကျစ်လစ်သွားနိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းအတောင်ပံတွေကိုဖြန့်ပြီးတော့ပျံနိုင်တယ်။ သိုလှောင်မှုအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ၎င်းအားလုံးကိုနောက်ပိုင်းတွင်သုံးရန်သေတ္တာထဲသို့အလွယ်တကူထည့်သည်။
Luigi နှင့် LEGO Super Mario 71387 Adventures သည်မည်မျှကုန်ကျသနည်း။
Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို ယူကေတွင် ၄၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ အမေရိကန်တွင် ၅၉.၉၉ ဒေါ်လာနှင့်ဥရောပ၌ ၅၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်ယမန်နှစ်ကနှင့်ကိုက်ညီသည်။artဟုတ်ပါတယ်၊ မာရီယိုနှင့်အတူ 71360 Adventures ကို.
← LEGO ပိုများသည် Stranger Things 2022 အတွက်လာမယ့်အစုံ?
LEGO သည် ၇၁၀၃၁ ၌ပျော်ရွှင်သောအပြုံးမျက်နှာများအားလုံးကိုရှင်းပြသည် Marvel စတူဒီယို →
တစ်ခုမှာ "LEGO Super Mario 71387 Luigi Startသင်တန်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း"
မင်း Luigi ကို Lego NES မှာ Mario အစားမင်းဘာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောအရာကိုပြုလုပ်ပါသလား။